सेनालाई बदनाम गर्न किन छुट ?
काठमाडौं । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी बर्ग र कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्ने स्वास्थ्य सामग्री माफियाहरु सेनालाई बदनाम गर्न लागि परेका छन् । ओम्नी समूहले ल्याएको सामानमा भ्रष्टाचार गनाएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दियो । सेनाले सरकारी नियमको मातहत र निकायको सिफारिसअनुसार स्वास्थ्य सामग्री ल्याइदियो । निर्णय तालुकदार निकायले गरेको हो भने माध्यममात्र बनेको नेपाली सेनामाथि अनियमितता गरेको आरोप किन लगाइँदैछ र तिनै माफियालाई सक्रिय पारेर कर्मचारी र मन्त्री कमिशनको चास्नी चुस्दैछन् ?
भारत र चीनवीच युद्धको माहोल बनिरहेको छ । नेपालको सीमामा तनाव छ, भारत नेपालविरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेको छ, वार्ता गर्दिन भन्छ । यस्तो संवेदनशील स्थितिमा सेनालाई आमनागरिकले समर्थन र सहयोग गरिरहेको बेलामा रक्षा मन्त्री नै भ्रष्टाचार भयो भनेर बदनाम गर्न तम्सिन्छन् भने, यो दुर्भाग्य हो । यस्ता रक्षामन्त्री बोकेर नक्सा छाप्ने प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि कसरी फिर्ता ल्याउँछन् ? यस्ता गैरजिम्मेवार रक्षामन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जरुरी छ ।
नेपाली सेनाले भनिसकेको छ– अनाहकमा बिबादमा मुछ्ने प्रयत्न हुन्छ भने नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सामेल हुँदैन । तैपनि विषयलाई बिषयान्तर गर्न माफियाहरु नेपाली सेनाले ल्याएको २८ हजार कोरोना परीक्षण किट काम नलाग्ने भयो । काम नलाग्ने सामान ल्याउने सिफारिस गर्ने विशेषज्ञ, निर्णायकहरु को को थिए ? नेपालमा रहेका मेसिनमा फिट हुन्छ भनेर गलत सिफारिसकर्तालाई कारवाही किन भएन ? अख्तियार के हेरिरहेको छ ?
तिनै कमिशन खाने कमिलाहरु यतिबेला सरकारी अस्पतालहरुमा थुप्रिएका स्वाव संकलनहरुको परीक्षण कुन कुन निजी अस्पताललाई दिने, कति आउँछ कमिशन भनेर हिसाव कितावमा जुटेका छन् । महामारीमा संकलित स्वावको स्वादमा रमाउने भ्रष्टहरुले मर्ने बाँच्ने ठेगान नभएका बेला पनि खान नछाड्ने भए । म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर अझै भ्रष्टाचार गर्न चाहनेहरु सरकार परिवर्तनमा जुटेको देखिन्छ ।